Ny tontolon' IkalaFanja: FANOMEZANA ho FISAORANA - GIVEAWAY
Publié par Ikala Fanja à 20:41
Izay Tia Maquillage 10 octobre 2014 à 22:22
Misaotra betsaka amin'ny fizaràna. tsy ny fanomezana ihany fa zava-tsoa maro efa hita eto hatramin'izay.Faly ery aho fa na tsy nisy loka aza dia efa nahafeno ireo fepetra rehetra satria efa mpanaraka an'Ikala Fanja eraky ny tambajoatra misy azy rehetra. Hozaraiko ao amin'ny facebook koa ity concours ity mba hampitombo ny vintako e hihi Ilay loka Raozy no iriako ho azo. Dia misaotra hatrany mazoto mizara izay hay aminay e
aina vicky 12 octobre 2014 à 05:55
misaotra mandray anjara fa mahafinaritra loatra
tonga soa ao @ Ekipa Raozy
andriatsarafaramahefa antsavola 10 octobre 2014 à 22:38
Tiako be ilay idée:) misaotra mizara ho anay mpankafia.
RAOZY: moule 1 sy sotro lehibe
aina vicky 12 octobre 2014 à 05:56
mankasitraka anao mandray anjara
faralalaina lai 11 octobre 2014 à 02:26
Misaotra nanasa ilalao e. in moa fa dia tsara daholo, to be mpaka ny raozy koa aleo ary fa VOASARY e , mba mampazoto mianatra lakozia koa :)
aina vicky 12 octobre 2014 à 05:57
misaotra @ fandraisana anjara fa mahafinaritra be
tonga soa ao @ ekipa Voasary
Olivia Razafinjatoniary 11 octobre 2014 à 02:37
Tena tsara be ilay hevitra. Ahatarafana ny hatsaram-ponao ilay fitiavanao mizara izay anananao ka hitanao fa hahasoa ny hafa. Ilay raozy no tiako indrindra amin'izy efatra fa mety amiko koa na ilay zakaranda aza.
aina vicky 12 octobre 2014 à 05:58
mankasitraka @ fandraisana anjara sy ny toraka vonikazo :)
Mbolatiana Betzemeier 11 octobre 2014 à 03:54
mahafinatra be ilay toe-tsaina tia mizara, tsara fa tohizo hoy ny mpampianatra izay :)
izany izao no tsy ampy @zao vanim-potoana iainantsika izao
efa afaka manao coms @zay aho fa nanokatra compte google
aina vicky 12 octobre 2014 à 06:00
misaotra mandray anjara é, mahafaly fo
iza ny ekipa misy an'i Madama? eran-tany anie mandray anjara fa aza manahy
Mikolo Raitra 11 octobre 2014 à 05:31
Misaotra @fanomezana Ikala Fanja a! Rehefa fanomezana ka vokatry ny fo dia mahafinaritra foana e! Ny ahy izany ilay voaloboka no mba tiko ho azo :)
aina vicky 12 octobre 2014 à 06:01
mankasitraka @ fandraisana anjara é
arabaina fa ianao no voalohany @ ekipa Voaloboka,
Razafimahenina Volatiana 11 octobre 2014 à 05:46
misaotra ny fifampizarana RAOZY ny ay no tiako
aina vicky 12 octobre 2014 à 06:02
mankatelina @ fandraisana anjara
tonga soa eto @ ekipa Raozy
RAZAFINDRADIMY Hanta 11 octobre 2014 à 10:54
Misaotra mizara ee!! Tohizo hatrany fa tena mahaliana foana e!! Ny ahy ny RAOZY no safidiko. Mankasitraka ee
mankamamy sy misaotra @ fandraisana anjara
tonga soa @ ekipa Raozy
Michelle Rabemanantsoa 11 octobre 2014 à 23:45
Humm, hatao ahoana ny tsy handray anjara amn'ity lalao ity amin'ireto loka tsara tarehy be dia be ireto!! indrindra ilay Raozy izay mba nofisiko :)
Misaotra betsaka akia amin'ny fizarana rehetra fa mahafinaritra a.
aina vicky 12 octobre 2014 à 06:04
misaotra be dia daly be ny fokeliko
Lys Suez 12 octobre 2014 à 00:48
Za efa no com's fa toa tsy hitako eto e! Lasa aiza nga e! Lay zakiranda ny ahy. Misaotra nizara e! Ba many.
aina vicky 12 octobre 2014 à 06:05
tsy noesoriko aloha ilay com's fa aza manahy,
ndry no voalohany eto @ ekipa Zakaranda koa arabaina fa tonga soa
Holy Andriamady 28 octobre 2014 à 02:25
Mafinaritra ny manaraka ny tontolon'ikala Fanja, ary tiako ny voankazo VOALOBOKA ary safidiko ny Voaloboka @ty lalao ity. Misaotra @ fizarana!
aina vicky 31 octobre 2014 à 17:03
Mifarana hatreo ny fandraisana anjara! Ho ataoko ny fisarihana koa holazaiko @ commentaire manaraka ny nahazo loka. Sy ho avoaka @ pejy facebook
aina vicky 2 novembre 2014 à 06:41
Ireto ary ny valin'ny lalao:
Raozy: Volatiana Razafimahenina
Voasary: Lai Faralalaina
Voaloboka: Mikolo Raitra
Zakarandaha: Olivia Razafinjatoniary
Mankasitraka ireo rehetra nilalao,
Mankatelina ny rehetra mankafy ny Blog
faralalaina lai 5 novembre 2014 à 21:51
Misaotra indrindra akia Ikalafanja a!!! Miandry lalao manaraka indray ary e
Lys Suez 2 novembre 2014 à 11:41
Arabaina hoany mahazo loka. Miandry ny lalao manaraka
Izay Tia Maquillage 2 novembre 2014 à 21:36
Arahabaina izay nahazo loka eee dia miandry ny lalao manaraka indray :) mazotoa hatrany mizara fa mahafinaritra
Olivia Razafinjatoniary 4 novembre 2014 à 01:52
Misaotra indrindra amin'ny loka. Nahafinaritra ny lalao sy ny fanarahana anao "virtuellement." Mirary soa hatrany.
aina vicky 6 novembre 2014 à 02:17
Misaotra antsika rehetra e! @ manaraka indray 😉